नेकपाले गठन गर्यो न्युक्लियस टोली, यसले के काम गर्छ ? | Pennepal
Home राजनीति नेकपाले गठन गर्यो न्युक्लियस टोली, यसले के काम गर्छ ?
काठमाडौं । काठमाडौ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) क्षेत्र नम्बर १ काठमाडौले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि पार्टी नेता कार्यकर्ता परिचालन गर्ने भएको छ ।
त्यसका लागि राज्यका निकाय तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सहयोग गर्न ५ सदस्यीय एक न्युक्लियस कमिटी गठन गरेको छ । नेकपा नेता अनिल शर्माको संयोजकत्वमा गठन भएको सो समितिमा विदुर मैनाली, कल्पना राणा,ईश्वर सापकोटा र गणेश दुलाल सदस्य रहेका छन् ।
त्यस्तै पार्टी जिल्ला सदस्य तथा जनवर्गिय र मोर्चा संगठनलाई समेत समेटेर ११ वटा टोलहरुमा स्वयसेवक समिति गठन गरी स्थानीय तहमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । जसमा बानेश्वर हाइटमा विष्णु भुषाल, थापागाउँ वाणगंगामा रामप्रसाद अमगाई र हिरा थापामगरलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यसैगरी बुद्धनगरमा श्यामलाल तन्दुकार र सुर्यबहादुर कार्की रहेका छन् भने मैतीदेवी डिल्लीबजारमा रेवती दाहाल र आत्मराम राजवंशीलाई तोकिएको छ । घट्टेकुलो अनामनगरमा शर्मिला कार्की र सरला पौडेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
शंखमुलमा अनिताढोली कार्की र रामेश्वर पाण्डे, शान्तिनगरमा धनवहादुर अछामी र लिलाधर रिमाल, खरिवोट मिलनचोकमा देवराज शर्मा र राजेश जोशी, पुरानोवानेवर भिमसेनगोलमा सरोज ढकाल र भिमाम गौतम तोकिएका छन् । थापाथली बबरमहलमा पुष्प श्रेष्ठ र त्रिपुरेश्वर भोटेवहालमा मित्रलाल ठोकरलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
उनीहरुले नेपाल सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका आधिकारिक निकायबाट जारी गरिएका जनचेतना मुलक जानकारीहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयन गराउन साथ सहयोग गरी जनतालाई भाइरसका विरुद्ध लड्न तयार गर्ने लगायतका काम गर्नेछन् ।
नेपालमा कोरोना परीक्षणका लागि कस्तो व्यवस्था छ ?